အားလုံး၏အကြီးမြတ်ဆုံးချစ်ခြင်းမေတ္တာ — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
လူတိုင်းကိုချစ်သောခံရဖို့လိုလား. ကျွန်တော်ဝန်ခံသို့မဟုတ်မပဲဖြစ်ဖြစ်, ကြှနျုပျတို့အားလုံးအခြားသူများ adored နှင့်တန်ဖိုးထားခံစားရဖို့ဒီသဘာဝကအလိုဆန္ဒရှိ. ကျွန်တော်တို့အများစုကကျွန်တော်တို့ကိုခစျြမှတစ်စုံတစ်ဦးကိုရှာဖွေနေကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ခုလုံးကိုဘဝဖြုန်း, မျှော်လင့်ချက်ကတစ်စုံတစ်ယောက်အတွက်- တယောက်ယောက်- အတွင်းအပြင်ဒီတောဝစွာကျွေးမည်.
ကောင်းပြီဒီနေ့သင်အချစ်ဇာတ်လမ်းအတွက်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဆုံးရှုံးဖို့စီစဉ်နေတာပါနှင့်သင်နောက်ဆုံးကြောင်းတောငျ့ကျေနပ်အောင်လိမ့်မယ်မျှော်လင့်ပါတယ်လျှင်, ငါသည်သင်တို့ကိုသင့်ရည်မှန်းချက်လည်းအနိမ့်ကြောင်းသိလို. သင်တစ်ဦးဖယောင်းတိုင်အလင်းညစာမှာယနေ့ညအပေါင်းတို့၏အကြီးမြတ်ဆုံးချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုရှာဖွေမည်မဟုတ်. သို့သော်, တစ်ဦးအားလုံးအစွမ်းထက်ရှိပါတယ်, အားလုံးကျေနပ်, သငျသညျမှရရှိနိုင်စုံလင်သောမေတ္တာ. သငျသညျသငျသညျအစဉျအမွဲစိတ်ကူးနိုင်ထက်ပိုမိုချစ်သောသူတစ်ဦးသညျဘုရားသခငျရှိပါတယ်. သူ၏မေတ္တာအပွောငျးအလဲမဟုတ်ပါဘူးနှငျ့သငျကိုယ်တော်ကို woo သို့မဟုတ်ထိုသို့အလုပ်လုပ်ရန်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး.
တစ်ခါတလေကျွန်တော်တို့ကိုအများအပြားသညျဘုရားသခငျကိုတကယ်ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်သောသူဖြစ်စေမစဉ်းစားမိသိ. သူကဒါဝေးပုံရသည်. သူကသည်ငါတို့အဘို့ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်စေတစ်ခုခုကိုပြုလျှင်ထိုဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျနော်တို့သံသယရပ်တန့်ချင်ပါတယ်. သမ္မာတရားကိုကျွန်တော်တို့ကို, သူဟာပြီးသားရှိပါတယ်. သမ္မာကျမ်းစာကဤသို့ဆို၏, "ဘုရားသခကျနော်တို့ဆဲအပြစ်များသောသူဖြစ်ကြသတည်းကြောင်းစဉ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပြသ, ခရစ်တော်သည်ငါတို့အတွက်ကြောင့်အသေခံတော်မူ၏။”
တဖန်ကပြောပါတယ်, "ဘုရားသခင်သည်ဒါကြောင့်ကမ္ဘာ့အခစျြရ, သူသည်မိမိအသာသားတော်ကိုပေးသော, အကြင်သူသည်သူ့ကိုယုံကြည်သောထာဝရအသကျပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ပေမယ်ရှိသည်မဟုတ်သင့်ကြောင်း။”
ဘုရားသခင့ပြီးသားတစ်ဦးမယုံနိုင်စရာလမ်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုသူ၏မေတ္တာတော်ကိုပြတော်မူပြီ, ငါတို့အဘို့အသားတော်ပေးခြင်းအားဖြင့်. ကမ္ဘာ၏သမိုင်းအတွက်ချစ်ခြင်းမေတ္တာရဲ့အကြီးမြတ်ဆုံးလုပ်ရပ်ငြင်းပယ်မနေပါနဲ့. သင်တို့၏ဝိညာဉ်၏နှစ်သက်ငြင်းပယ်မနေပါနဲ့. အဲဒီအစားယေရှု၌ယုံကြည်ကိုးစားခြင်းဖြင့်ထိုမေတ္တာခံယူ.
ကိုယ်တော်ကိုယုံကြည်ကြသူကိုသူတို့အဘို့, အစဉ်အဆက်ဘုရားသခင်၏မေတ္တာတော်မှကျွန်တော်တို့ကိုခွဲခြားနိုင်သည်ကိုကမ္ဘာ့အရာမရှိ. နှင့်သူ၏လူတို့အဘို့သူ၏မေတ္တာသည်ကြီးမြတ်, ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကိုသူကပြီးသားမထက်ပိုချစ်ကြစေရန်ဘာမှလုပ်ဘယ်တော့မှမနိုငျကွောငျး.
ဒါကြောင့်ဒီ Valentine Day ကိုပေါ်, နှလုံး fam ယူ. သင်သည်မည်သည့်နောက်ထပ်ကြည့်ရှုရန်မလိုပါ. ဘုရားသခင့နက်ရ​​ှိုင်းစွာသင်ချစ်သောသူ
DJ Mas သို့မဟုတ်ရှံဆုန် • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:37 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ကျေးဇူးတင်ပါသည် Lee ကခရီးစဉ်ကိုသင်တစ်ဦးစစ်မှန်တဲ့ Inspiration ငါ့အသက်ကိုအလိုငှါဘုရားသခင်၏သင်ကကောင်းကြီးပေးနေကြတယ်!!!
Violetchirwa • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:38 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Carolyn • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:38 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ကြောင်းနည်း, Tru, ငါ့အစ်ကို. nice လာမည့်မျိုးဆက်အကြောင်းရင်းတက်တာကိုမြင်. မေလဘုရားသခငျသညျအထံတော်အဘို့သင့်နယ်မြေနှင့်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကျယ်.
ကေသီ Washington7 • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:38 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
နင့်ကိုချစ်တယ်, သုံးဆ!!! သငျသညျ comin လိုက်တဲ့အခါ’ အဆိုပါဆိပ်ကမ်းမှ?????
kayla:) • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:38 နံနက် • ပြန်ကြားချက်